အပေါ်မှတ်ချက်: ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအခက်အခဲများနှင့်အတူအသုံးပြုမှု Associated နှင့်အလုပ်မဖြစ် Younger လိင်ကွဲအမျိုးသားများအကြားသလား သင့်ရဲ့ဦးနှောက် Porn တွင် - Gert မာတင် Hald, Ph.D အားဖြင့်
လူငယ်များနှင့် ပတ်သက်၍ လေ့လာမှု - ED နှုန်း ၃၁%၊ လိင်စိတ်နည်းခြင်း ၃၇% ရှိသော်လည်း၊ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံသည်ညစ်ညမ်းမှုမဖြစ်နိုင်ပါ (Landripet & Stulhofer, 31)
အပေါ်မှတ်ချက်: ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအခက်အခဲများနှင့်အတူအသုံးပြုမှု Associated နှင့်အလုပ်မဖြစ် Younger လိင်ကွဲအမျိုးသားများအကြားသလား Gert မာတင် Hald, Ph.D အားဖြင့်
မှတ်ချက်များ၏ PDF ကိုလင့်ထားသော
Gert မာတင် Hald အားဖြင့်
အပိုဒ်ပထမဦးဆုံးအွန်လိုင်းထုတ်ဝေ: 14 မေ 2015
J ကိုလိင် Med 2015; 12: 1140-1141
အံ့သြစရာက၎င်း၏အလားအလာလက်တွေ့ဆက်စပ်မှုပေးထားအလွန်အနည်းငယ်လေ့လာမှုများ ( "လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအခက်အခဲများ" အဖြစ်ရည်ညွှန်းအောက်ပါအချက်များကိုအတွက်) ညစ်ညမ်းစားသုံးမှုနှင့်ဘုံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်နှင့်ပြဿနာများကိုအကြားဆက်ဆံရေးကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးရန်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ပြီ။ ဒါကြောင့်အမှုကိုပြုတော်မူပြီးမှအခါ, အလုပ်ဒီဇိုင်းများအများစုကိစ္စတွင်လေ့လာမှုဒီဇိုင်းများသို့မဟုတ်အုပ်စုလိုက်ဒီဇိုင်းများနှင့်အချက်အလက်စုဆောင်းခြင်းအရည်အသွေး၏နည်းလမ်းခဲ့ကြပြီ။ တနည်းအားဖြင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးသို့မဟုတ်လက်တွေ့အတွေ့အကြုံများအသုံးပြုသွားမည်ပါပြီ။ အရေးကြီးသောပေမယ့်, ထိုကဲ့သို့သောလေ့လာမှုများနှင့်တစ်ဦးတည်းအတှေ့အကွုံညစ်ညမ်း၏စားသုံးမှု၏ဆိုးကျိုးများအပေါ်ထမ်းဆောင်ခဲ့ကြ၏မည်မဟုတ်ပါ။ အကျိုးဆက် Landripet နှင့် Stulhofer အားဖြင့်လေ့လာမှုညစ်ညမ်းစားသုံးမှုနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအခက်အခဲများအကြားအသင်းအဖွဲ့များ၏အရေအတွက်တူးဖော်ရေးတစ်ရှည်လျားတန်ဖိုးရှိသော Cross-ယဉ်ကျေးမှုအစအဦးပေးထားပါတယ်။
ပိုများသောယေဘုယျအားဖြင့်, Landripet နှင့် Stulhofer အားဖြင့်လေ့လာ element တွေကိုညစ်ညမ်းအပေါ်သုတေသနအတွက်အရေးပါသောကိစ္စရပ်များအားရောင်ပြန်ဟပ်။ ပထမဦးစွာနမူနာအများဆုံးဖွယ်ရှိ non-ဖြစ်နိုင်ခြေနမူနာရှိပါသည်။ ဒါက  ယနေ့ညစ်ညမ်းပေါ်တွင်ရရှိနိုင်ပါသည်သုတေသနအများကြီး၏လက္ခဏာများဖြစ်သည်။ ဤပြဿနာကိုအတန်ငယ်လိင်နှင့်လိင်အပြုအမူအပေါ်အမျိုးသားရေးလေ့လာမှုများကို အခြေခံ. အနာဂတ်ကြီးမားသောလူဦးရေအတွက်ညစ်ညမ်းစားသုံးမှု, တိုတောင်းသောခိုင်လုံသောနှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရသောအတိုင်းအတာအပါအဝင်အားဖြင့်ထေနိုင်ပါသည်။ လူတို့တွင်အထူးသဖြင့်, ညစ်ညမ်းကုန်ပြီသောညစ်ညမ်းစားသုံးမှု၏ပျံ့နှံ့မှုနှုန်းနှင့်ကြိမ်နှုန်းထည့်သွင်းစဉ်းစား, ဒီနှစ်မျိုးလုံးအလွန်အမင်းသက်ဆိုင်ရာများနှင့်မြင့်မားသောအချိန်ဖြစ်ပုံရသည်။
ဒုတိယအချက်မှာလေ့လာမှုညစ်ညမ်းစားသုံးမှုနှင့်ရလဒ်များအကြားတစ်ဦးတည်းသာသိသာအသင်းအဖွဲ့ (ဆိုလိုသည်မှာ, erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု) ကိုလေ့လာနှင့်ဤဆက်ဆံရေးမျိုး၏အရွယ်အစား (ပြင်းအား) သေးငယ်တဲ့ကြောင်းအလေးပေးတွေ့။ သို့သော်ညစ်ညမ်းသုတေသနအတွက်, "အရွယ်အစား" ၏အနက်ကိုရလဒ်ကို၏သဘောသဘာဝအပေါ်သလောက်ရှာတွေ့ဆက်ဆံရေး၏ပြင်းအားအဖြစ်ကိုလေ့လာမူတည်လိမ့်မည်။ ရလဒ် (လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြင်းထန်တဲ့အပြုအမူတွေ, ဥပမာ) "လုံလုံလောက်လောက်ဆိုးရွားသော" စဉ်းစားရန်ဖြစ်ပါသည်လျှင်အပင်သေးငယ်တဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုအရွယ်အစား  စဉ်းစားဆင်ခြင်စရာလူမှုရေးနှင့်လက်တွေ့အရေးပါမှုကိုသယ်ဆောင်စေနိုင်သည်။
တတိယအချက်လေ့လာမှုကိုလေ့လာဆက်ဆံရေး၏ဖြစ်နိုင်သောမော်ဒသို့မဟုတ်ပြုပြီဖြေရှင်းပါဘူးမဟုတ်သလိုကြောင့်ကြောင်းကျိုးဆက်စပ်ဆုံးဖြတ်ရန်နိုင်ဖြစ်ပါတယ်။ ပို. ပို. , ညစ်ညမ်းအပေါ်သုတေသနပြုခြင်း, အာရုံစူးစိုက်မှုဆက်ဆံရေး၏ပြင်းအားသို့မဟုတ်လမျးညှနျခသြဇာလွှမ်းမိုးစေခြင်းငှါအချက်များအားပေးပြီးမှဖြစ်ပါတယ် [1,3] ထိုကဲ့သို့သောသြဇာလွှမ်းမိုးမှု (ဆိုလိုသည်မှာပြုပြီ) အကြောင်းကိုမဝင်စေခြင်းငှါအရာမှတဆင့် (ဆိုလိုသည်မှာ, မော်ဒ) အဖြစ်လမ်းကြောင်းလေ့လာခဲ့သည်။ ညစ်ညမ်းစားသုံးမှုနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအခက်အခဲများအပေါ်အနာဂတ်လေ့လာမှုများကိုလည်းထိုကဲ့သို့သောအာရုံစူးစိုက်တစ်ခုပါဝင်မှအကျိုးဖြစ်နိုင်တယ်။
စတုတ္ထအချက်အနေဖြင့်၎င်းတို့၏နိဂုံးချုပ်ကြေငြာချက်တွင်ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများအသုံးပြုခြင်းထက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအခက်အခဲများနှင့်ဆက်နွှယ်သောအကြောင်းအချက်များစွာရှိသည်ဟုစာရေးသူများကအကြံပြုထားသည်။ ပိုမိုကောင်းမွန်သောဤအကဲဖြတ်မှုအတွက်ဤပြောင်းလဲမှုတစ်ခုချင်းစီ၏ဆွေမျိုးအလှူငွေထည့်သွင်းရန်၊ ရလဒ်များကိုသြဇာသက်ရောက်ရန်လူသိများသို့မဟုတ်တွေးဆထားသော variable များအကြားတိုက်ရိုက်နှင့်သွယ်ဝိုက်ဆက်နွယ်မှုနှစ်ခုလုံးကိုလွှမ်းခြုံနိုင်သည့်ပြည့်စုံသောမော်ဒယ်များကိုအသုံးပြုခြင်းကိုအကြံပေးလိမ့်မည်။
ယေဘုယျအား Landripet နှင့် Stulhofer အားဖြင့်လေ့လာမှုပထမနှင့်ညစ်ညမ်းစားသုံးမှုနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအခက်အခဲများအကြားဖြစ်နိုင်ခြေအသင်းအဖွဲ့များသို့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ Cross-ယဉ်ကျေးမှုနှင့်အရေအတွက်ထိုးထွင်းသိမြင်မှုကိုပေးပါသည်။ မျှော်လင့်နှိုင်းယှဉ်အနာဂတ်လေ့လာမှုများထပ်မံအမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးနှစ်ဦးစလုံးအကြားညစ်ညမ်းစားသုံးမှုနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအခက်အခဲများအကြားဆက်ဆံရေးအပေါ်သုတေသနပြုတိုးဖို့ခြေလှမ်းတခုအဖြစ်ဤသုံးနိုင်ပါသည်။
Gert မာတင် Hald, ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာန, ကိုပင်ဟေဂင်, ကိုပင်ဟေဂင်တက္ကသိုလ်, ဒိန်းမတ်
1 Hald GM, Seaman C, Linz D. လိင်နှင့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေ။ ခုနှစ်တွင်: Tolman: D, စိန် L ကို, Bauermeister J ကို, ဂျော့ခ်ျ W, Pfaus J ကို, ရပ်ကွက်က M, eds ။ လိင်နှင့်စိတ်ပညာ၏ APA လက်စွဲစာအုပ်: Vol ။ ၂ ။ ၀ ါရှင်တန်ဒီစီ: အမေရိကန်စိတ်ပညာအသင်း၊ 2: 2014-3 ။
၂ Malamuth NM, Addison T, Koss M. ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျူးကျော်မှု - ယုံကြည်စိတ်ချရသောအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသလားကျွန်ုပ်တို့နားလည်နိုင်ပါသလား
သူတို့ကို? Annu ဗြာလိင် Res 2000;11: 26-91 ။
3 Rosenthal R. မီဒီယာအကြမ်းဖက်မှု၊ လူမှုရေးဆိုင်ရာအမူအကျင့်များနှင့်အကျိုးသက်ရောက်မှုငယ်များ၏လူမှုရေးအကျိုးဆက်များ။ J ကို Soc ကိစ္စများ 1986; 42: 141-54 ။